[BUSHAARO]:-Fadaa'isha Iyo Khayrka Ku Duugan Habeenka Laylatul-qadriga Ee Bisha Ramadaan.
Tuesday June 05, 2018 - 14:51:00 in Maqaallo by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Waxaa Habenkan caawa ah bilaaban doona tobankii ugu danbeeyay ee bisha Ramadaan waxaana ku sugan khayraad iyo ajar faro badan waxa kaloo ay leedahay fadliyo aad u ballaadhan, Tobankan habeen ee ugu Dambeeya Ramadaan waxa qiimo
Hargeysa-(Caalami-News)-Waxaa Habenkan caawa ah bilaaban doona tobankii ugu danbeeyay ee bisha Ramadaan waxaana ku sugan khayraad iyo ajar faro badan waxa kaloo ay leedahay fadliyo aad u ballaadhan, Tobankan habeen ee ugu Dambeeya Ramadaan waxa qiimo ugu filan in uu ku jiro habeenkiiuu bilaabmay soo degitaanka Quraanku. Habeenkaasi waa Habeenka Laylatul-Qadriga.
Waa habeen barakaysan oo ka khayr badan kun bilood (83 sano).
Waa habeen dad badan laga xoreeyo ciqaabta iyo cadaabta Alle.
Waa habeen qofkii Alle dartii iyo ajar doon u istaaga uu Ilaahay danbigiisii hore dhaafo. Haddaba qiimaha ay habeenadani leeyihiin dartood ayuu Nabi Maxamed (csw) uu dedaalkiisa habeenadan u laban laabi jiray.
- Waxa ku sugan Bukhaari iyo Muslim xadiisyo tilmaamaya sidii uu Nebigu (CSW) uu u cibaadaysan jiray tobanka danbe ee bisha Ramadaan waxana ka mid ah Xadiis Micnihiisu yahay: (Marka ay gaadho tobanka danbe ee bisha Ramadaan Nebigu (CSW) guntiga ayuu u adkaysan jiray, habeenkana wuu noolayn jiray ehelkiisana wuu toosin jiray).
Waxa uu la iman jiray cibaadooyin iyo acmaal ka badan kuwa uu la iman jiray habaynadii ka horeeyay tobankan. Haddaba Fursadan waxa looga faa'idaysan karaa in la sameeyo arrimahan: 1- Habeenkii oo cibaado lagu nooleeyo.
Nabigu (csw) habeenadan waa uu noolayn jiray.
Waxa uu ku noolayn jiray Quraan akhris badan, dikriga Alle, Salaad, duco iwm.
2- In ehelka la kiciyo si ay khayrkan uga qayb-qaataan.
- Nebigu (csw)habeenadan reekiisa waa uu toosin jiray si ay fursadan uga faa'idaystaan.
3- In qofkii awoodaa uu tobankan cisho masaajidka fadhiisto (ictikaafo).
Sida ay Caa'isha soo warisay nabigu(csw) tobanka cisho ee Ramadaan ugu danbeeya waxa uu ku ictikaafi jiray Masaajidka. Dhaqankan kama tagin nabigu (csw) ilaa uu geeriyooday.
In lagu dadaalo raadinta habeenka Layltul-Qadriga.
Laylatul Qadrigu waa habeen ka mid ah Tobonka Dambe ee Ramadaan, Balse habeenka uu yahay la iskuma raacsana laakiin waxa ay u badan tahay in uu ku jiro habeenada kisiga (Kala Dhiman) ah ee tobankan habeen ka mid ah.
Waxa ayna ugu sii badan tahay in uu yahay Habeenka 27 aad.
- 4-In khilaafka iyo doodaha aan khayrka lahayn laga fogaado, isla markaasna hadii ay jiraan cidii uu khilaaf idinka dhaxeeyo waa in aad la heshiiso.
Waxa la soo wariyaa in cibaadooyinka dadka is khilaafsan aan kor loo qaadin ilaa ay ka heshiinayaan, Sidaa darteed hadii ay jiraan dad uu khilaaf idinka dhaxeeyo ku dadaal in aad la heshiiso.
In sadaqada la badsado. Khaastana in la bixiyo Sakooyinka.
Isku day maalmahan in dadkaa aad caawiso.
Gabgabdii habeenadani waa habeeno barako iyo khayr.
Hadii uu sanadkan Alle fursadan ku gaadhsiiyo ma hubtid in ay mar kale ku soo mari doonto fursadani ee ka faa'idayso.
Walaalo badan oo sanadkii hore waqtigan oo kale inala joogay, sanadkan inalama joogaan oo aakhiro ayay u socdaaleen.
By :--- Zakariye Maxamed Axmed